Mponin’i Jiangmen ao Shina Manohitra Tobim-Panodinana Uranium · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Jolay 2013 5:11 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Swahili, Español, Aymara, English
Namakivaky ny tanàna mitondra sora-baventy sy manao sarontava izay mivaky manao hoe “Mila zaza (maro) izahay fa tsy atôma” ny mpanao fihetsiketsehana. Milaza ny mpanao fihetsiketsehana fa matahotra taratra mampidi-doza sy ny mety hisian'ny fandotoana nokleary ry zareo.
Araka ny voalazan'ny The New York Times dia efa nanao soniam-pifanarahana tamin'ny Vondron'orinasa Nasionaly ao Shina ny manampahefana ao Jiangmen handray ny tetikasa mitentina enina miliara dolara amerikana. Kasaina hatomboka amin'ny faran'ity taona ity ny Fanorenana. Nanambara ilay tetikasa ny fiadidiana ao an-toerana tamin'ny herinandro, ka nanome 10 andro ny vahoaka hilaza ny heviny. Nilaza ny manampahefana fa tsy mampaninona ilay toby, saingy tsy resy lahatra ny mponina. Nisy valandresaka vaovao natao taorian'ny fihetsiketsehana, ka nanome 10 andro fanampiny indray hilazan'ny vahoaka ny heviny.
Tamin'ny fanombohan'ity taona ity, nisy fihetsiketseha-panoherana mitovy amin'izao nitranga koa tany Kunming atsimon'i Shina ho fanoherana ny toby fanadiovan'etona fandrehitra.
Efa nitatitra ny South China Morning Post (Hafatra Maraina Shina Atsimo) fa nomanina tamin'ny alalan'ny tolotra fifandefasana hafatra ao Shina QQ sy WeChat ny fihetsiketsehana.
Tonga moa dia voasivana haingana dia haingana ny fampahafantarana momba ny fihetsiketsehana tao amin'ny Sina Weibo. Mbola nisy mpiserasera Weibo sasantsasany nahavita nihodidina ny sivana ihany ka namoaka sary vitsivitsy.
Indreto ambany ireto ny sasantsasany tamin'ny fihetsiketsehana hita ao amin'ny Sina Weibo:
Sora-baventy mivaky hoe: Mila zaza (maro) izahay fa tsy atôma. (tao amin'ny Sina Weibo)